Xiaomi နှင့် Redmi ထုတ်ကုန် ဌာနခွဲ ကို စမတ်ဖုန်း ဌာနခွဲ အဖြစ် ပေါင်းစည်း ခဲ့သည် - Pandaily
Xiaomi နှင့် Redmi ထုတ်ကုန် ဌာနခွဲ ကို စမတ်ဖုန်း ဌာနခွဲ အဖြစ် ပေါင်းစည်း ခဲ့သည်
Jun 07, 2022, 12:33ညနေ 2022/06/07 14:12:19 Pandaily
ဘေဂျင်း အခြေစိုက် စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီကြီးXiaomi သည် မကြာသေးမီက အဖွဲ့အစည်း ညှိနှိုင်းမှုကို ကြေငြာ ခဲ့သည်. Xiaomi Products Department နဲ႔ Redmi Products Department တို႔ဟာ စမတ္ဖုန္း ထုတ္ကုန္ Department အျဖစ္ ေပါင္းစည္း လိုက္ၿပီး Ling Xiaobing ဟာ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ အျဖစ္ တာဝန္ယူ ထားတယ္လို႔ Sina Technology
စမတ်ဖုန်း ထုတ်ကုန် ဌာန တွင် Xiaomi ထုတ်ကုန် ဌာန၊ Redmi ထုတ်ကုန် ဌာနနှင့် Pad ထုတ်ကုန် ဌာန တို့ပါဝင်သည်။ Shisa သည် Xiaomi ထုတ်ကုန် ဌာန ၏အကြီးအကဲ ဖြစ်ပြီး Guo Ruimin သည် Pad ထုတ်ကုန် ဌာန ၏အကြီးအကဲ ဖြစ်ပြီး Ling Xiaobing သည် Redmi ထုတ်ကုန် ဌာန ၏အကြီးအကဲ ဖြစ်သည်။ လင် သည် Group ၏အကြီး တန်း ဒု ဥက္က president ္ဌ Lu William နှင့် စမတ်ဖုန်း ဌာန ဥက္က president ္ဌ Zeng Xuezhong တို့အား
ဤ ညှိနှိုင်း မှုသည် မကြာခဏ ထွက်ခွာ ခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Xiaomi သည် မူရင်း အုပ်စု VP နှင့် Xiaomi ၏ စမတ်ဖုန်း ထုတ်ကုန် ဌာန၏ အထွေထွေ လုပ်ရိုးလုပ် စဉ် များ ထွက်ခွာသွား ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ပြီးနောက် Zhang Xuezhong သည် Xiaomi ၏ စမတ်ဖုန်း ထုတ်ကုန် ဌာန၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ အဖြစ်တာ ဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi India က ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ကို ေၾကညာ
ဤ ညှိနှိုင်း မှုသည် မကြာခဏ ထွက်ခွာသွား ပြီးနောက် နေရာလွတ် များ ကိုဖြေရှင်း ရန်နှင့် Xiaomi စမတ်ဖုန်း များ၊ Redmi စမတ်ဖုန်း များနှင့် pad ထုတ်ကုန် များအကြား ဆက်သွယ်မှုကို ပိုမိုအားကောင်း စေ ရန်ရည်ရွယ်သည်။
မေလ မှာ ထုတ်ပြန် ခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ ရရှိ မှု အစီရင်ခံစာအရ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် မတ်လ အထိ MIUI ဟာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ လစဉ် တက် တက်ကြွ ကြွ သုံးစွဲသူ အရေအတွက် စံချိန်တင် မြင့်တက် ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် MIUI ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ MAU သည် ၅ ၂၉ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၃. ၈ သန်း တိုးလာခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်မကြီး မှ MAU သည် ၁၃၅. ၆ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၇ သန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။
Q1 နဲ႔ Xiaomi စမတ္ဖုန္း လုပ္ငန္း ရဲ႕ ဝင္ေငြ ဟာ ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္မွာ ယြမ္ ၄၅ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၇ ဘီလ်ံ) ရွိခဲ့ၿပီး မႏွစ္က Q1 ရဲ႕ ၅၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ ရင္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္း ခဲ့ပါတယ္။ Xiaomi ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စမတ်ဖုန်း လုပ်ငန်း သည် ယူနစ် ၃၈. ၅ သန်း တင်ပို့ ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် ၄၉ သန်း ရှိရာမှ ၂၁. ၄% ကျဆင်းခဲ့သည်။
Xiaomiအမှတ်တံဆိပ် ခွဲ Redmi သည် ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်း ခဲ့ရသော K50 e-sport ဗားရှင်း ကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Gadgets Feb 16 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2022